Mampiasa vola be amin’ny fanatanjahantena ara-miaramila sy famelomana tantara mba hanatsarana ny fitiavan-tanindrazana i Viktor Orbán ao Hongria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2019 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Italiano, Español, русский, English
Ireo mpamelona tantaram-pirenena any Budapest tamin'ny taona 2016. Sary natolotry ny kormany.hu, vohikalan'ny Governemanta Hongroà.
Nandrotsaka euro an-arivony tany amin'ireo fikambanana ara-panatanjahan-tena sy ireo vondrona mpamelona tantara ny minisiteran'ny fiarovana Hongroà mba hampiditra ao an-tsaina ny fahatsapana fitiavan-tanindrazana eo amin'ny tanora, araka ny tatitra avy amin'ny Atlatszo.hu, fampahalalam-baovao tsy miankina iray mpanao fanadihadiana.
Nitombo 5,6 tapitrisa euros tamin'ny taona 2018 ny tetibola nomen'ny minisitera ho an'ireo ONG raha 760.000 euro izany tamin'ny taona 2014 (860.000 sy 6,4 tapitrisa dolara Amerikana). Raha tsy niova ny famatsiam-bola ho an'ny sendikàn'ny varotra, ireo menazavana, ny fandaharan'asa ara-kolontsaina ary ny fikambanana ara-tantara, dia niakatra avo folo heny kosa ny tetibola ho an'ireo fikambanana ara-panatanjahan-tena tao anatin'izany fotoana izany.
Nahazo 3,46 tapitrisa euros (3,92 tapitrisa dolara amerikana) hatramin'ny nanangana azy tamin'ny taona 2017 ny fikambanana Ara-panatanjahantenan'ny miaramila, fikambanana ahitana ireo vondrona mampianatra ny fiarovan-tena sy ny tifitifitra ara-panatanjahan-tena, ankoatra ny hafa. Nilaza ny tranonkalan'ny fikambanana fa ny tanjona voalohany dia ny hampianatra fahaiza-manao ho an'ireo ankizy izay mahasoa amin'ny “fiarovana ny tanindrazana.”
Nahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ihany koa ireo fikambanana mpamelona tantaram-pirenena, ny fikambanana ho fahatsiarovana sy ireo vondrona mpiikaroka momba ny tantaran'ny miaramila – nahazo 125 000 euros (142 000 dolara amerikana) tamin'ny taona 2018, ary 692 000 euros (784 000 dolara amerikana) tao anatin'ny dimy taona.
Mifanaraka amin'ny paikady ankapobeny momba ny fanabeazana nataon'ny Praiminisitra Viktor Orbán ny fepetra noraisin'ny minisitera'ny fiarovana, izay efa nanoratra indray fandaharam-pianarana nasionaly imbetsaka ny governemantany nandritra ny taona maro mba hampiditra ny fiofanana miaramila sy ny tantaran'ny miaramila.
Vao haingana i Orbán no nanendry ny Minisitry ny Fiarovana teo aloha, István Simicskó ho Kaomiseran'ny Governemanta amin'ny Fanabeazana ny Fitiavan-tanindrazana, izay hiandraikitra ny fandinihana ny fandaharam-pianarana mba hampiditra ao an-tsaina, araka ny teny lazainy, “ny mari-panondroam-pirenena salama” any an-tsekoly.
Tamin'ny taona 2016, nanambara ny governemanta fa hanangana sehatra fitifirana miisa 197 manerana ny firenena amin'ny vidiny 81 tapitrisa euros. Nilaza ireo mpitsikera tamin'izany fotoana izany fa namorona “vondrona milisy goavana” i Orbán.
Nomena ny lohateny hoe “Hongria: fomba tsotra hanatsarana ny fitiavan-tanindrazana”, ampahany amin'ny fanadihadiana lalindalina kokoa nataon'ny Vsquare.org momba ny fampiasana miaramila ho an'ny fitiavan-tanindrazana any amin'ny firenena Visegrad (Hongria, Polonina, Slovakia, ary ny Repoblika Tseky) ny tantaran'i Anita Kőműves. Mifototra amin'ny angona azo mivantana avy amin'ny Minisiteran'ny Fiarovana any Hongria ny tantaran'i Kőműves.